Airlinesgbọ njem kachasị nchebe n'oge COVID bụ Qatar Airways, Emirates, Etihad, Delta Air Lines tinyere 14 ndị ọzọ | Akụkọ ụgbọ elu
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Airlinesgbọ elu kachasị nchebe n'oge COVID bụ Qatar Airways, Emirates, Etihad, Delta Air Lines tinyere 14 ọzọ
Airlinesgbọ elu kachasị nchebe n'oge COVID bụ Qatar Airways, Emirates, Etihad, Delta Air Lines tinyere 14 ọzọ
Nchekwa ikuku na-eme njem n'oge COVID-19 dị oke egwu, kpọmkwem mgbe ị na-ebido ụlọ ọrụ njem na njem. Airgbọ elu 19 mere akara dị mma maka nchekwa.
Naanị ụgbọ elu ndị mba ụwa iri na itoolu nọ na nchịkọta egwuregwu mgbe a bịara na nchekwa na ụgbọelu n'oge COVID 19. Qatar Airways, Emirates, Etihad, Delta Airlines, bụ ndị kacha elu 19 nwere akara nke 4 na karịa. 4.3 ọzọ natara akara n'etiti 15 na 4.0
The Barometer Safe Travel na-ebuputa atumatu 33 n'ofe ụgbọ elu 319 - ma ndị ọrụ zuru oke ma ndị dị ọnụ ala (LCCs). E kenyere atumatu ndị a na ngalaba atọ
A na-atụle ụgbọ elu 52 na ala nke ndepụta ahụ. STP Airways, Fuji Dream Airlines, Envoy Air, Helvetic Airways, na IBEX nwetara akara nke ihe na-erughị 47 nwere akara dị n'etiti 2 na 2.9.
19 International Airlines mere nke magburu onwe ya site na nke atọe Safe njem Barometer n'ihi na ụgbọ elu dị ka Airlinesgbọ Ala Safest kachasị na-aga n'oge COVID-19 Delta Airlines bụ naanị ụgbọ elu United States debanyere aha na-eme akara ahụ. Nchịkọta kachasị mma na ụwa gara Qatar Airways.
Qatar Airways, Qatar Akara 4.5
Emirates, UAE Akara Akara 4.4
Etihad Airways, UAE Akara 4.3
Usoro Ikuku Delta, USA: Akara 4.3
Lufthansa, Germany Akara 4.1
Air China, China Akara 4.1
Turkish Airlines, Turkey Akara 4.1
Vistra, India, Akara 4.1
Iberia, Spain Akara 4.1
Cathay Pacific, Hong Kong Akara 4.0
Qantas Airways, Australia, Akara 4
Southwest Airlines, USA, Akara 4
China Southern Airlines, China, Akara 4
All Nippon Airways, Japan, Akara 4
Air Asia, Malaysia, Akara 4
Air Canada, Canada Akara 4
IndiGo, India, Akara 4
Virgin Atlantic, UK, Akara 4
Air India, India, Akara 4
The Safe njem Barometer n'ihi na ụgbọ elu họọrọ ndị na-esonụ 52 ụgbọ elu na ala nso nke ụgbọ elu tụlee njem na n'oge COVID-19
STP Airways, Akara 1
Fuji Dream Airlines, Akara 1.5
Envoy Ikuku, Akara 1.7
Helvetic Airways, Akara 1.8
IBEX Airlines, Akara 1.8
Ikuku Corsica, Akara 2
Saudi Gulf Airlines, Akara 2
Onur Ikuku, Score 2.1
Norwegian Air, Akara 2.2
Airda Ikuku, Akara 2.3
Ikuku Chathams, Akara 2.3
Cayman Airways, Akara 2.3
Viva Ikuku, Akara 2.3
Eluigwe Express 2.3
Croatia ụgbọ elu, Akara 2.3
Albawing, Akara 2.4
Sun Country Airlines, Akara 2.4
Winair, Akara 2.4
Aurigny Ikuku Ugo 2.4
Abgbọ elu Seaborne, Akara 2.5
Cape Air, Akara 2.5
Jet2.com, Akara 2.5
Maya Island Ikuku :, Score 2.6
Ikuku Namibia, Akara 2.6
Aeromar, Akara 2.5
Edelweiss Air, Akara 2.6
Ugwu Ugwu 2.6
Udo ikuku, Akara 2.7
Azores Airlines, Akara 2.7
Belavia, Akara 2.7
Luxair, Akara 2.7
Mgbanwe Canary, Scrore 2.7
Air Serbia, Akara 2.7
Swoop, Akara 2.8
Georgian Airways, Akara 2.8
Ikuku Tropic, Akara 2.8
Flyadeal, Ugo 2.8
Bulgaria Ikuku, Akara 2.8
NordStarAirlines, Akara 2.8
Piedmont ụgbọ elu, Akara 2.8
GOL Airlines, Akara 2.8
TAROM, Akara 2.8
Ikuku ikuku, Akara 2.9
Egbọ elu Aegean, Akara 2.9
Elinair, Akara 2.9
Ikuku Greenland, Akara 2.9
Caribbean Airlines, Akara 2.9
Ikuku Burkina, Akara 2.9
Ogbọ elu Lao, Akara 2.9
Asl ụgbọ elu France, Akara 2.9
East Jet, Akara 2.9
SKY AIrline Peru, Akara 2.9
Ọbụlagodi ka ụgbọ elu na-aga n'ihu na ọgụ nke COVID-19, mkpa nke oge a bụ ịhazigharị usoro nchekwa nchekwa ahụike na ahụike COVID-19 n'ụwa niile. Akụkụ dị mkpa nke a bụ nchikọta nke data ahụike nke ụgbọelu, ọdụ ụgbọ elu ndị metụtara ya, na ndị isi mbata na ọpụpụ nwere ike nyochaa iji nyochaa onye njem ahụ ka ọ na-emewanye ahụmịhe njem nke ọdịnihu. Iji mezuo nke ahụ, gọọmentị na ụlọ ọrụ ụgbọelu n’otu n’otu na-agbadata echiche nke akwụkwọ ikike ngafe ahụ ike. N'ikpeazụ, 'paspọtụ' ndị a na-egosi ndị njem COVID-19 ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ma na-akwado ya site na nnabata ahụ ike onwe ha nwere ike ịme ụzọ iji hụ na njem adịghị mma.
Barometer Njem Nchekwa bụ ụlọ ọrụ teknụzụ njem na-arụ ọrụ na njikọta njem na ahụike. Ihe ntinye ederede nke API tinyere COVID-19 usoro ahuike na nchedo nke ndi 2,000, bu ndi na enye ahia gafee ulo oru njem 10, na ihe ndi choro njem nke mba 150. Kpọmkwem, Barometer Safe Travel na-ahụta atụmatụ iri atọ na atọ n'ofe ụgbọ elu 33 - ma ndị ọrụ zuru oke ma ndị na - ebu ọnụ ala (LCCs). E kenyere atumatu ndị a na ngalaba atọ - Usoro nchekwa nchekwa COVID-319, Ọfụma Ndị Njem, na Ọmarịcha Ọrụ. Ndabere na nkwupụta ọkwa ọha na eze, ụgbọ elu na-egosi na a Nchekwa Njem Nchekwa. Na mkpokọta, 6% nke ụgbọ elu 319 enyochachara ruru Nchekwa Njem Nchekwa nke 4.0 na elu.
Kwa nyocha na February 28, 2021, Qatar Airways nke Doha na-eduga maka ọnwa nke abụọ na-esote ya na a Nchekwa Njem Nchekwa nke 4.5 si 5.0. Ebute ụzọ Qatar Airways n’ụwa niile na ndị na-arụ ọrụ zuru oke site na atụmatụ ya metụtara ngalaba abụọ - COVID-19 Safety Protocols (98%) na Traveler Convenience (100%) - nke na - enyere aka Nchekwa Njem Nchekwa. Emirates dara ihere nke Qatar Airways na a Nchekwa Njem Nchekwa nke 4.4 na otu ọnwa, Etihad Airways na Delta Air Lines na-esote akara nke 4.3 si na 5.0 n'otu n'otu.